अष्ट्रेलीयामा नेपाली बिद्यार्थीले किन गर्छन अत्महत्या ? रहस्य यसरी देखाइयो गीतबाट - LaltinKhabar
अष्ट्रेलीयामा नेपाली बिद्यार्थीले किन गर्छन अत्महत्या ? रहस्य यसरी देखाइयो गीतबाट
अष्टेलियामा रहेका सर्जक माधब न्यौपानेले ‘पागल पागल बनाई हिडि ’ बोलको गीत सार्वजनीक गरेका छन् । नेपाली लोक तथा दोहोरी सागीँतिक दुनिँयामा सुमधूर आवाजबाट स्रोताहरुको मन जित्न सफल गायिका पुर्णकला बिसीसंग नवोदित गायक माधवले स्वर दिएका छन् । गीतको भीडियो ईनाक्षी ईन्टरटेनमेन्टेको युटुब च्यानलबाट सार्वजनीक गरिएको हो ।
सार्वजनिक गीतको शब्द संगित गायक माधव आफैको हो भने भीडियोमा डायलग मनु धमलाको रहेको छ । अष्टेलियामै छाँयाडकन गरिएको सो भिडियोमा माधव न्यौपाने, कल्पना गैरे, दीपक सापकोटाको अभिनय देख्न सकिन्छ । जीवन रासाईलीको छायाकँन रहेको ‘पागल पागल बनाई हिडि ’ गीतको भिडियो सम्पादन मिलन विश्वकर्माले गरेका हुन् । ईनाक्षी ईन्टरटेनमेन्टेको प्र स्तुतीको सो गीतलाई बि स्टार फिल्म प्रालिले निर्माण गरेको हो ।
गीतको भिडियोमा अष्टेलियामा रहेका युवाहरुको माया र मित्रतालाई देखाइएको छ । पछिल्ला समय अष्टेलियामा नेपाल विद्यार्थीद्धारा आमहत्याका गरएका घटनाहरु भईरहेका छन् । ती घटना हुनु पछाडीका रहस्यलाई समेत भिडियोमा देखाईएको छ । ‘गीतले अष्टेलियामा रहेका लाखौँ युवाको अवस्था देखाएको, घर परिवारबाट टाढा रहेका युवाहरुले माया प्रेमको लागी आफ्ना प्रेमी प्रेमीकाप्रति दर्शाएको त्याग र पाएका धोकाका विषयमा भिडियोमा उतारिएको छ,’ गायक माधव भन्छन्, ‘अष्टेलियामै खिचिएको भिडियोका लोकेसनले दर्शकाका आँखामा शितलता दिन्छ ।’